Uru 10 nke iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa & wardsgwọ Ọrụ Mmemme | Martech Zone
N'inwe ọdịnihu akụ na ụba a na-ejighị n'aka, ọ dị oke mkpa na azụmaahịa na-elekwasị anya na njigide ndị ahịa site na ahụmịhe ndị ahịa na ụgwọ ọrụ maka iguzosi ike n'ihe. Ana m arụ ọrụ na ọrụ nnyefe nri mpaghara yana usoro ụgwọ ọrụ ha mepụtara na-aga n'ihu na-eme ka ndị ahịa na-alọghachi ugboro ugboro.
Nkwado Ndị Ahịa nke Iguzosi Ike n'Ihe
Dabere na Experian's Whitepaper, Iwulite Iguzosi Ike n'Ihe na World Cross-Channel:
34% nke ndị bi na US nwere ike kọwaa dị ka ika eguzosi ike n'ihe
80% nke ndị na-eguzosi ike n'ihe na-ekwu na ha anaghị azụta ụdị amaghị ama naanị iji chekwaa ego
Ndị na-eguzosi ike n'ihe na-anabata echiche ọhụrụ ma zaghachi okpukpu abụọ ọnụego azụmahịa na mkpọsa na-egosipụta uru mmemme iguzosi ike n'ihe ọhụrụ
Ndị na-eguzosi ike n'ihe na-enye budata elu pịa ọnụego na nyocha na nyocha arịrịọ, yana akwụkwọ ịkpọ òkù ka ị bụrụ onye na-akwado akara na saịtị mgbasa ozi
Ọ bụ n'ezie ihe na-enye nsogbu na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye ego maka ndị ahịa ọhụụ ma leghaara ndị ahịa ahụ nọgidere na-eguzosi ike n'ihe ma nwee mmetụta dị ukwuu na ala ụlọ ọrụ ahụ. E gosipụtara uru nke ụgwọ ọrụ nkwụsi ike nke iguzosi ike n'ihe:
75% nke ụlọ ọrụ US nwere mmemme iguzosi ike n'ihe na -emepụta nloghachi na itinye ego. O doro anya na nke a bụ uru kachasị dị mkpa maka azụmaahịa na-etinye dollar ha na mmemme ntụkwasị obi.
Ihe omuma a sitere na Zinrelo, Top 10 Ele nke a iguzosi ike n'ihe wardsgwọ Ọrụ Program, na-egosi uru dị na mmemme ịkwụ ụgwọ iguzosi ike n'ihe:
Gbọala Ntugharị Ahịa - a na-emezu nke a site na ịnye ụgwọ ọrụ maka ụdị ọrụ ọ bụla, gụnyere ịmepụta akaụntụ, ndenye aha email, mgbasa ozi mmekọrịta na-esote, ntinye foto, ntinye aka, wdg. Nke a bụkwa ụzọ dị mma iji weghachite ndị ọrụ nọ jụụ ma ọ bụ mụbaa ahịa na ndị ahịa ugbu a.
Mụbaa Nkezi Nke Bara Uru - Ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe na-azụta ọtụtụ mgbe ma na-etinyekwu ihe kwa azụmahịa.
Lower Ahịa Inweta Cost - Tinye ntinye aka na mmemme ụgwọ ọrụ gị ka ndị ahịa gị gbasaa okwu na ngwaahịa na ọrụ gị. Okwu nke ọnụ na-ebu ọtụtụ ibu na ndị na-azụ ahịa.
Mee ka mmesi ike megide asọmpi - Ọ bụrụ na onye ahịa gị nwere ụgwọ ọrụ echekwara, ọ na-echegbu onwe ha na ha ga-ahapụ akara gị… ọbụlagodi na onye asọmpi ahụ adịghị ọnụ.
Belata ego na ndị ahịa - products nwere ngwaahịa ịkwesịrị ịkwaga? Kama ịbelata ha onye ọ bụla, nye ha nhọrọ dị elu maka ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe kama.
Mee ka ọnụego ndị a na-atụgharị - Gosi ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị ahịa ga-enweta site n'ụgbọ ala ha ugbu a… ma ha nwere ike iwepụtakwu karịa iji nweta isi ihe.
Nhọrọ Ngwaahịa Mmetụta - Jiri ọtụtụ iji mee ka ngwaahịa ndị dị elu dịkwuo ọnụ maka ndị ahịa gị na-eguzosi ike n'ihe.
Mee profaịlụ njirimara bara ọgaranya - Chọrọ ozi ndị ọzọ ka mma nkewa ma hazie nkwukọrịta ahịa gị? Nye ihe nkwụghachi ụgwọ maka ịmecha profaịlụ na nnata nnata maka ịzụta ịntanetị.
Mee ka Ọdịnaya mepụtara Onye Ọrụ - kwụghachi ndị ahịa ụgwọ maka ide ederede, ịza ajụjụ, na ibugo foto.
Dịkwuo Social Media Ikere - Nye ndị ọrụ iguzosi ike n’ihe isi maka ịkesa mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Zinrelo na-enyekwa ụfọdụ usoro iji gbakọọ ịdị irè nke usoro ọrụ ụgwọ ọrụ ọ bụla na ozi ha.
'' Zinrelo na-enye oge a, iguzosi ike n'ihe na-akwụghachi ụgwọ n'elu ikpo okwu nke ahụ na-eme ka ahịa na ọnụ ahịa ndị ahịa na-abawanye site na ntinye aka nke ndị ahịa 360. Zinrelo na-agba ume ọtụtụ akụkụ nke iguzosi ike n'ihe gụnyere azụmahịa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ntinye aka, itinye aka na iguzosi ike n'ihe omume. Ọ na - akwado nkesa mgbasa ozi niile nke gafere desktọpụ, ekwentị na ụlọ ahịa anụ ahụ.
Tags: ahịa nnwetaahịa nnweta na-eriezi ndị ahịaahịa iguzosi ike n'ihe n'elu ikpo okwuọnụ ọgụgụ ndị ahịa na-eguzosi ike n'iheụgwọ ọrụ ndị ahịaahịa ụgwọ ọrụ n'elu ikpo okwuna-agbadammụba nkezi iji uruala ahịa nnweta na-eriiguzosi ike n'ihe na-akwụghachi ụgwọ n'elu ikpo okwuụgwọ ọrụ mmemmennukuprofaịlụ onye ọrụokwu onuzinrelo